Pane Pane Chero Yakanaka Nguva Yekutangisa Itsva Yemagariro Network? | Martech Zone
Chitatu, Ndira 17, 2018 Svondo, Ndira 21, 2018 Douglas Karr
Ndiri kupedza yakawanda nguva shoma mumasocial media. Pakati peakakanganisika algorithms uye kusaremekedza kusawirirana, iyo shoma nguva yandinopedza munzanga midhiya, ndinofara ini.
Vamwe vanhu vandaigovana navo kusagutsikana kwangu vakandiudza kuti yaive yangu mhosva. Ivo vakati yaive hurukuro yangu yakavhurika yezvematongerwo enyika mumakore mashoma apfuura akavhura musuwo. Ini zvechokwadi ndaitenda mukujeka - kunyangwe pachena kwezvematongerwo enyika - saka ini ndaive nekudada nezvandaitenda uye ndaizvidzivirira pamusoro pemakore. Izvo hazvina kushanda zvakanaka. Nekudaro, pamusoro pegore rapfuura ndakaita kuyedza kwakabatana kudzivisa kukurukura zvematongerwo enyika online. Chinhu chinonakidza ndechekuti vanondishora vachiri kutaura sezvavanenge vamboita. I think ivo pachokwadi vaingoda kuti ndinyarare.
Kuzivisa zvizere: Ini ndiri wezvematongerwo enyika weirdo. Ini ndinoda zvematongerwo enyika nekuti ndinoda kushambadzira. Uye kutsamira kwangu kunoshamisa. Ini pachangu, ndinozvibata kuti ndibatsire kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani. Nharaunda, ndine rusununguko uye ndinoonga mutero kubatsira vamwe vanoshaya. Munyika yose, zvakadaro, ndinotenda isu tanyanyisa kukoshesa shanduko.
Ini handisi nyajambwa, asi mhedzisiro yerusununguko rwangu inondivhurira kuti ndirwiswe nemunhu wese. Shamwari dzangu dzakasendamira kuruboshwe nyika dzinotenda kuti ndiri backwoods, kurudyi-bapiro nzungu basa. Shamwari dzangu dzino tsamira kurudyi munharaunda dzichishamisika kuti nei heck ini ndiri kutandara nevazhinji maDemocrat. Uye pachangu, ndinozvidza kunyorwa kune chero nzira. Ini handifunge kuti zvakakosha kuvenga zvese nezve munhu kana wezvematongerwo enyika kana iwe usingawirirane nemunhu mumwe kana chikamu cheiyi pfungwa. Mune mamwe mazwi, ndinogona kukoshesa dzimwe shanduko dzematongerwo enyika dziri kuitika nhasi ndisingaremekedze vezvematongerwo enyika vakavaita.
Dzokera kumasocial network.
Ini ndaitenda chivimbiso chinoshamisa chemagariro enhau ndechekuti tinogona kuva vakatendeseka, kuzivana, kunzwisisana, nekuva padhuze Wow, ndanga ndakanganisa here. Kuzivikanwa kwemagariro enhau pamwe chete nekusagona kugona kupaza vanhu vaungafungire zvakaipa.
Masocial network akaputsika, uye masimba arikuve achitowedzera (mumaonero angu).
On Twitter, runyerekupe rune icho kuti kana iwe uchivharirwa ne @williamlegate, iwe wakazivikanwa seyakarurama-bapiro nzungu uye uri mumvuri wakarambidzwa - zvichireva kuti zvaunovandudza hazviratidzwe murukova rweveruzhinji. Ini handizive kana chiri chokwadi, asi ini ndaona kuti kukura kwangu kwave kumbomira. Chikamu chinotyisa cheichi ndechekuti ini ndinofarira Twitter. Ndinosangana nevanhu vatsva, ndinowana nyaya dzinoshamisa, uye ndinoda kugovana zvemukati mangu ipapo.
Ndakabvunza @jack, asi muchimiro chechokwadi chakavhurika - handisati ndanzwa mhinduro.
Hey @jack, Ndiri fan hombe ye @Twitter uye ndikaona ndingadaro #mumvuri warambidzwa. Ndinokuda iwe kuti uverenge kuburikidza nema tweets angu uye undiudze chii, nezve zvematongerwo enyika, zvakashata kana kusaremekedza. Chokwadi kunyadziswa kuona izvi. Kana iwe uri kurambidza vanhu vanonzwisisa seni - izvo zvinopfuura zvinotyisa.
On Facebook, ivo vari kubvuma izvozvi kusefa chikafu kune dzimwe hurukuro dzevanhu. Izvi, mushure memakore ekumanikidza makambani kuvaka nharaunda, kuve pachena mukubatana kwavo nevatengi nemabhizinesi, uye makambani anoisa mamirioni mukuvaka kusangana, otomatiki, uye nekuzivisa. Facebook yakangodhonza plug panzvimbo.
Mune maonero angu akatendeseka, kusiyiwa kwekusarudzika kwezvematongerwo enyika kune njodzi kudarika kutsamira kwavo. Ini handina dambudziko nehurumende yekuongorora masocial account uko maakaundi akurudzira zviitiko zvisiri pamutemo, asi ini ndine dambudziko rakakura nemakambani achigadzirisa zvinyararire gakava racho nenzira yavanoda. Facebook iri kutosiya zvinyorwa kubva kune vhoti yakajairika. Mune mamwe mazwi, iyo bubble inosimbiswa zvakanyanya. Kana vashoma vasingabvumirani, hazvina basa - ivo vachazopihwa ruzhinji rwevanhu chero zvakadaro.
Panofanirwa Kuve Nenharaunda Yemagariro Network
Vamwe vanhu vanotenda kuti Facebook neTwitter ndizvo zvatakamanikidzwa nazvo. Mazhinji manetwork akaedza kukwikwidza uye ese akakundikana. Zvakanaka, takataura chinhu chimwe chete nezveNokia neBlackberry kana zvasvika kune nharembozha. Ini handina mubvunzo kuti netiweki nyowani inogona uye ichatonga pamusika painotsigira rusununguko rwakagonesa Twitter neFacebook kubudirira.
Nyaya haisi yakaipa pfungwa, itsika dzakaipa. Hatichatarisirwi kupokana neruremekedzo neavo vatisingabvumirane navo. Tarisiro yanhasi ndeyekunyadzisa, kuseka, kudheerera, nekunyaradza iye anozvidza. Nhepfenyuro dzedu dzinoratidza hunhu uhu. Kunyangwe vezvematongerwo enyika vedu vakatora hunhu uhu.
Ndiri fan hombe yekuve nekusiyana kwekufunga. Ini ndinogona kusawirirana newe uye ndichiri kuremekedza zvaunotenda. Nehurombo, nemapato maviri, isu tinongoita kunge tinokwikwidzana pamusoro pemusoro pane kuuya nemhinduro pakati inoremekedza vese.
Izvi Zvine Zvese zvine chekuita NeKushambadzira?
Kana masvikiro (nhau, kutsvaga, uye vezvenhau) vakawanikwa vachipindira mune zvematongerwo enyika, zvinokanganisa bhizinesi rega rega. Zvinondibata. Ini handina mubvunzo kuti zvandinotenda zvakakanganisa bhizinesi rangu. Ini handichashandira vatungamiriri muindasitiri yangu vandaitarisa kumusoro uye kudzidza kwavari nekuti vakaverenga mafungiro angu pazvinhu zvematongerwo enyika ndokufuratira.
Uye izvozvi isu tinotarisa sevarwi verunyararo varwi parutivi rumwe nerumwe rwemitambo vanobata mabhureki achizvidavirira kwavanoisa kushambadza kwavo, uye zvinotaurwa nevashandi vavo online Vanokurudzira kurohwa ... izvo zvisingangokanganisa vatungamiriri vemabhizinesi, asi mushandi wese mukati uye nharaunda dzakavakomberedza. Imwe tweet ikozvino inogona kukanganisa mutengo wemari, kukuvadza bhizinesi, kana kuparadza basa. Ini handingambodi kuti avo vasingabvumirane nedzidziso yangu varangwe mune zvemari nekuda kwavo. Izvi zvakawandisa. Izvi hazvisi kushanda.
Mhedzisiro yeizvi zvese ndeyekuti mabhizinesi ari kudzoka kubva pasocial media, kwete kuzvigamuchira. Mabhizinesi ari kuita zvishoma kujeka, kwete kujekesa. Vatungamiriri vebhizinesi vanovanza kutsigira kwavo kwemafungiro ezvematongerwo enyika, kwete kuasimudzira.
Tinoda pasocial network iri nani.
Tinoda sisitimu inopa mubayiro kuremekedza, kudzikinura, uye kuremekedza. Tinoda sisitimu inosimudzira inopokana maonero panzvimbo pekukudziridza dzimba dzehasha dzehasha. Isu tinofanirwa kudzidzisana uye nekuratidzana kune mamwe maonero. Tinofanirwa kushivirira dzimwe pfungwa.
Hapana imwe nguva iri nani pane izvozvi yekuvandudza pasocial network chikuva seichi.
Tags: FacebookJackzvematongerwo enyikashadowbanmumvuri wakarambidzwaTwitterwandira